Ndicime iAkhawunti yam yeBasecamp namhlanje | Martech Zone
Kwixesha elidlulileyo, bendi fan Imiqondiso engama-37. Ndiyakholelwa ukuba babephambi komhla wabo kuyilo lomsebenzisi kunye nokulula. Incwadi yabo, Ukufumana okwenene, isanefuthe kwindlela endiphuhlisa ngayo, ndiyile kwaye ndakhe iimfuno zeemveliso. Ndisebenzise i- Basecamp akhawunti kwaye ndalandelela ezininzi zeeprojekthi zam kunye nabathengi apho ukusukela ngehlobo elidlulileyo.
Ngelixa ufunda ifayile ye- Imiqondiso engama-37 blog kulo nyaka uphelileyo, ndiye ndaphawula ukuba ithowuni yebhlog itshintshe kakhulu, iyagweba ngakumbi kwaye iphelile kunokuba ibuze kwaye iphonononge. Umzekelo, esi sithuba. Iimpawu ezingama-37 zigxotha ngokupheleleyo izicelo ezenziwa kwi-intanethi / ngaphandle kweintanethi ngenxa yokuba unxibelelwano yinto esinokuthi sonke sibe nayo, kuyo yonke indawo. Nalu uluvo lwam endilubhalileyo kwibhlog:
Umbono ojonge le nto umxinwa kangangokuba ndothuke ngokwenyani njenge fan yeempawu ezingama-37. Uxuba ukusebenza kwi-Intanethi nangaphandle kweintanethi ngoNxibelelwano lweIntanethi
Lo ayingombuzo wokudityaniswa, ngumbuzo wolawulo lwezixhobo. Ukuba ndingaba nesicelo esisebenzisa izixhobo zelaptop ngokufanelekileyo njengaleyo iseva, kunye nokulinganisa ukusetyenziswa kwebhanwidth phakathi kwezi zimbini, inokwenza amava omsebenzisi kubo bonke ababandakanyekayo.
Ndongeze inqaku lokuba ukusetyenziswa kwebomb-f kwakungeyomfuneko kwaphela. Kwivoti endiyenzileyo kwibhlog yam, malunga neepesenti ezingama-40 zempendulo zichaze ukuba abakuthandi ukusetyenziswa kwe-cussing kwiwebhu. Kwizithuba ezininzi, ndiyibonile isetyenziswa ngendlela ehlekisayo… kodwa kwiimpawu ezingama-37 zebhlog yayiyimbambano… kum, umfundi onokungavumelani nabo. Kwakungenambeko. Ungandivi kakubi, ndiyaxubusha (kakhulu). Kodwa andiyenzi kwibhlog yam apho ndizama ukunxibelelana nabafundi bam endaweni yokubahlukanisa.
Ukufunga ayisosizathu sokuba ndirhoxise eyam Basecamp Akhawunti namhlanje, nangona. Kubasebenzisi abali-12 ebendinabo, ibindim kuphela oyisebenzisileyo iBasecamp. Ndicinga ukuba omnye umhlobo wam wongeze into enye yokwenza, ngaphandle kokuba yayindim ndedwa umsebenzisi kunyaka ophelileyo (kwaye ndihlawule iakhawunti). IIMHO, olona vavanyo lokusebenziseka kwesicelo kukuba abantu bayayisebenzisa okanye hayi. Abathengi kunye nabantu endisebenza nabo khange bayenze. Ngapha koko, ndicinga ukuba bayithintele ekuyisebenziseni kuba yayingeyonto ilula ukuyisebenzisa.
Esi ayisosizathu sokuba ndirhoxise, nangona kunjalo. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ibhlog yabo yazisa enye i-chunk yokungazi: Abantu abaskroli… ii-imeyile. Mhlawumbi bekufanele ukuba bathethile kubaxumi abangama-6,000 esibasebenzelayo abafumana uguquko olumangalisayo kunye nokucofa amaxabiso kwii-imeyile eziyilelwe kakuhle ezifuna ukuskrola. Ngaphezulu kwesibaya 'ithiyori - ulwazi abafundi abalubonayo xa beqala ukuvula i-imeyile luyabenza. Oko akuthethi ukuba abaskroli, nangona kunjalo! Ke-ngaphandle kwayo nayiphi na idatha yokuxhasa ingxelo yabo engenangqondo, abafundi beMiqondiso ngokuchasene nengxolo yebhlog ngoku bazokukholelwa kwaye babhale ii-imeyile ezingazisi lwazi, eziluncedo, eziyilwe kakuhle, njlnjl .. konke oku ngenxa yokuba ibhlog ethile ibixelele ukuba le yeyona nto ichazayo phendula.
Isizathu sokuba ndirhoxise iakhawunti yam yeBasecamp kukuba ndilahlekelwe lukholo kwiZimpawu ezingama-37. Andiqinisekanga ukuba kukuzingca ekukhuleni nasekuphumeleleni kwenkampani yabo, kodwa ukukhanya kwabo kuye kwaqaqamba. Ndisengumlandeli wokusebenza okulula kwezicelo zabo… kodwa usetyenziso xa lulonke alubonakali ngathi luyayiguqula imbonakalo yomhlaba njengoko babenzile ngaphambili. Ndiza kubona kamva, 37! Kwakumnandi ngelixa lihlala.
Ngelishwa, ndatshintshela kwi-iGTD, usetyenziso lwe desktop.
tags: Iimpawu ezingama-37Basecamp
Epreli 7, 2007 ngo-6: 22 PM
Nam, mhlekazi, ndakhubeka yi-37Signal post. Kuyacaphukisa ilizwe elisaphuhlayo, kananjalo.
Epreli 7, 2007 ngo-8: 58 PM
Ndiyavuma ukuba akuyomfuneko ukufunga kwiiblogi, ukuba awukwazi ukufumana indawo yakho ngaphandle kokufunga, ayisiyonto inamandla leyo.
Kubonakala ngathi ibekwe apho ukuze ifumane impendulo, njengoko ndiqaphele ukuba bekukho iikhomenti ezingama-200 kwiibhloko ezingama-37 zemiqondiso.
Epreli 7, 2007 ngo-10: 14 PM
UStephen - wavuma. Malunga nokufunga, yinxalenye yentlonipho endingayiqondiyo. Ngetalente encinci, ungothusa umntu, uthembeke kwaye ubonakale, kodwa uhlale unembeko. Andiqondi ukuba ukufunga kunokuba yinzuzo njani kwibhlog yenkampani.
Epreli 7, 2007 ngo-10: 02 PM
Bendihlala ndifunda rhoqo i-37Signals blog, kodwa ndikhathazeke kakhulu ngayo kunye nabantu abasemva kwayo. Abantu abakhaliphileyo, kwaye ndiyabulela ukugxila kwabo ekulula nasekugxileni kumsebenzisi. Kodwa-ngokufana nento oyiphawulileyo- ugxininiso kwibhlog luye lwangumba wedwa kunye nokunyaniseka ("siyinyani, wonke umntu usisiyatha"), kwaye ndiyifumene izithoba kwaye iyacaphukisa.
I-IMHO, abantu abasemva kwe-37Signals banikezele kwinto ebonakala ngathi ixhaphake kakhulu namhlanje… ukucinga ukuba, kulungile, ngenxa yokuba inkampani yethu iphumelele, indlela yethu yokwenza izinto yeyona ndlela ilungileyo KANYE wonke umntu unokuphinda impumelelo yethu ngokufunda iindlela zethu.
Hogwash. Kukho abantu abaninzi abanobuqaqawuli obothusayo kunye neenkampani ezimangalisayo eziye zaphuma ngenxa yamathamsanqa okanye ixesha elibi kunye nabantu abanomdla kunye neenkampani ezilizothe eziphumelele ngenxa yethamsanqa kunye nexesha elifanelekileyo. Baninzi kakhulu abantu ngokubanzi becinga unxibelelwano kunye nezizathu apho kungekho ngqiqweni khona.
Ndikhetha indlela ethobeke ngakumbi: Nantsi into esiyenzileyo, nantsi into eyenziwe yinkampani yethu… thatha kuyo into othanda ukuyenza. Mhlawumbi ingakulungela, mhlawumbi lolona khetho loyikekayo kwinkampani yakho… wazi ngcono.
Epreli 7, 2007 ngo-10: 09 PM
Amanqaku amakhulu, Adam.
Ndicinga ukuba esinye sezi zifundo kukuba ibhlog inokuba yintsikelelo okanye isiqalekiso kwinkampani yakho. Ukuba uyintsini… ibhlog yakho iya kuyiveza loo nto. Abantu abakuthandi ukusebenza neejezi. Ithoni yebhlog yabo indiphendulele kwinkampani yabo iphela.
Yintoni enomdla kukufunda inyanga yokugqibela yamangeniso kwaye uthelekise nencwadi, Ukufumana okwenyani. Ithoni yahluke kakhulu ekuqalekeni kwabo okuthobekileyo.
Epreli 7, 2007 ngo-11: 13 PM
Ndonwabile ukubona ukuba ayindim ndedwa umntu oye wafumanisa ukuba abathengi babo abayisebenzisi nje kuphela iBasecamp, kodwa abanakuze bangene kuyo.
Epreli 8, 2007 ngo-6: 26 AM
Kufana nokuba uyifundile ingqondo yam, emva koko uyibhale phantsi ngendlela emfutshane kakhulu kunokuba bendinokuba nayo.
Nam, ndingabhalisanga kwi-37s kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ngenxa yokuba 'silungile, wonke umntu uphosakele -sijonge, ngaba asiyonto imnandi'. Kubuhlungu, ngokwenene. Ngokuqinisekileyo ngabantu abanetalente.
Epreli 8, 2007 ngo-8: 48 AM
Qaphela ukuba bakhankanyile uMark Hurst / Amava aLungileyo kwixa elidlulileyo, kwaye ndiyakholelwa ukuba bathethile kwiNkomfa yeGel. Incwadana yamava aMnandi yenye ye-imeyile ende endiyifumanayo… kwaye ndihamba ndikroba kuwo onke amagama ayo.
Epreli 8, 2007 ngo-10: 54 AM
Amanqaku athile: Ndiyavuma ngokupheleleyo notshintsho lwethoni, kwaye ndiye ndacaphuka nayo. Ngokuqinisekileyo andiyifundi i-SvN yonke imihla ngehlombe endandikade ndilikho. Nangona kunjalo, ndingathanda ukunika amanqaku aphikisayo:
1. Awuvakali ngathi kujolise kubathengi be-Basecamp, ngakumbi ukuba unokutshintsha ukusebenza kwayo usebenzisa i-desktop ezimeleyo. Kwaye ukuba abathengi bakho abangeni, banokufumana iimfuno zabo ze-PM zigcwalisiwe kwenye indawo.
2. Re: Ukufunga, ibhlog yabo. Ukuya kuthi ga ngoku ndixhalabileyo, ndingathanda ukuba nomxholo othe tye othe ngqo kunokwenziwa mhlophe mhlophe ufunda kuyo yonke indawo.
3. Ukucinga ukuba bezingacacanga, ndicinga ukuba babhekisa ngokukodwa kubhaliso / ukwazisa ii-imeyile, hayi ukuthengisa nge-imeyile ngokubanzi. Khumbula enye yeenjongo zabo kukuba babe nenzuzo kangangoko kwaye banciphise ukukhathazeka komsebenzisi ngokuphelisa iimfuno zenkxaso naphi na apho kufanelekileyo. Ukuba bathumela le nto, mhlawumbi babonile uninzi lwezicelo zenkxaso ezivela kubantu abangazifundanga ngokupheleleyo ii-imeyile ezithunyelwe kubo. Andiqinisekanga ukuba yeyiphi inkuthazo ekufuneka bayenze apha. Kwaye impendulo yakho iyandibetha njengokuzikhusela kancinci * nakwi-POV yesimakishi se-imeyile (ndilungise ukuba andilunganga).
Epreli 8, 2007 ngo-11: 33 AM
Molo SirZ! Onke amanqaku amahle, mandiphendule:
1. Mhlawumbi. Ndaya kwi-desktop kuphela ndaza ndafumana olunye ulawulo lweprojekthi / isixhobo solawulo lwemveliso. Ndiyakholelwa ekubeni kufanelekile ukuba kubekho usetyenziso oluphangaleleyo oluza kwabelana nabaxumi- ndiqinisekile ukuba iBasecamp ayisiyiyo egwebeni kwimpendulo zabaxumi bam. I-imeyile yayiseseyona ndlela iphambili yokunxibelelana nokwenziwa, iinjongo zeprojekthi, ii-docs, njl.
2. Ndenzelwe ukungafihli nto, kodwa ungayifumana ingongoma yakho ngaphandle kokufunga. Inqaku lam koku kukuba ayimfuneko kwaye ngeke hlukanisa abanye abantu abanokuzithanda iimveliso zakho kunye nenkampani yakho. Kukuzithoba nje ngentlonipho.
3. Uchanekileyo ngokuchanekileyo, impendulo yam iyazikhusela njengomthengisi we-imeyile. Ihlabathi le-IT lithanda ukwahlula unxibelelwano nge-imeyile ngamaqela amabini: ukusebenza kunye nentengiso. Ukuba inqaku labo kukuba ii-imeyile zokuSebenza akufuneki zikrwitshelwe, kuya kufuneka ke babonelele ngesiseko soluvo. Ukuchaza nje ayenzi yinyani.
Ngokusekwe kubaxhasi bethu, inyani ibonakala yahluke kakhulu. Andinayo idatha eqinileyo yokuxhasa inkcaso yam, kodwa amava am ahlukile. I-imeyile yokusebenza ngendlela yokubhalisa yi ogqibeleleyo indawo yokusebenzisa ikopi ye-HTML ende kunye nezikrini, iinkcazo, kunye nezinye iindlela eziphambili zoyilo. Ndingatsho ukuba i-imeyile esebenzayo yeyona ndawo ibhetele yokuskrola kune-imeyile yokuthengisa kuba umntu obhalisileyo elindele ukufumana unxibelelwano!
Kwakhona lithuba elifanelekileyo lokuthengisa kunye nokuthengisa okunqamlezileyo ngamathuba. Unomthengi obandakanyekayo onokuthi axabise imveliso eyongezelelweyo okanye umnikelo wenkonzo ngokusekwe kumxholo we-imeyile oyithumelayo.
Epreli 16, 2007 ngo-12: 40 PM
Isisombululo esihle kwi-Intanethi onokuzisingatha ngokwakho (okanye usebenzise inkonzo ebanjelweyo) yiProjekthi yeCopper. Ineencasa ezintathu ezifumana ukunyuka okubiza kakhulu ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho. Ndifumanisa ukuba kuma-90% amatyala am inguqulelo esemgangathweni isebenza kakuhle.
Ndenze uvavanyo lwe-Basecamp kwaye ngokungafihlisiyo aluzange lufezekise isithembiso sokuba yonke le hype indikhokelele ekubeni ndiyikholelwe. Ndisenengxaki yokubenza bayeke ukuhlawula imali yam kwikhadi lekhredithi nabo kwaye abancedi ngandlela zonke.
Inkonzo yabaThengi ayiyonxalenye ye-37Signals lexicon endiyifumanayo ilusizi kuba bekhwele iliza elikhulu kangaka le-PR kunye nenkoliseko ngokubanzi. Xa ufunda le bhlog kunye nabanye kubonakala ngathi baqalisile ukonakalisa umbono wabo kwindawo yentengiso. lusizi nje.
Epreli 18, 2007 ngo-12: 52 PM
Hlaziya nje. UDavid Heinemeier Hansson wenze imbuyekezo enkulu ngeenyanga ezimbini zekhadi letyala endandiphikisana nalo. Ndicinga nje ukuba le nkqubo ibinzima kakhulu kunokuba bekufuneka ukuba ibenjalo.
Ndiyathemba ukuba bayayiqonda into abamele yona. Iimpawu ziye zaba yenye yeeposta zabantwana / iinkampani zentshukumo yewebhu37 kwaye kuya kuba lihlazo ukubona loo mfanekiso ungcolisiwe.
Nazi iithisisi ezimbalwa ezivela kwi-Cluetrain Manifesto ezibonakala zichaphazeleka ngokukodwa…
18 Iinkampani ezingaziboniyo iimarike zazo ngoku ziqhakamshelana nabantu-nabantu, zikrelekrele njengesiphumo kwaye zingene kakhulu kwincoko ziphoswa lelona thuba lilungileyo.
Iinkampani ezingama-21 kufuneka zikhanyise kwaye zithathe kancinci. Kufuneka bafumane uburharha.
89 Sinamandla okwenene kwaye siyayazi. Ukuba awukuboni kakuhle ukukhanya, ezinye iimpahla ziya kuza nazo ziqwalasele ngakumbi, zinomdla ngakumbi, ziyonwabisa ngakumbi ukudlala nazo.
95 Siyavuka kwaye sidibanisa. Sijonge. Kodwa asilindi.
Yenza izinto ngokufanelekileyo kunye nabathengi okanye uza kushiyeka
Sep 24, 2008 ngo-1: 25 PM
Yena… ke, ukufunga kukunyaniseka kwaye ukungafungi kukunganyaniseki?
Epreli 8, 2007 ngo-2: 07 PM
Ndikholelwe kakhulu kwi-37Signals ukusukela kwincwadi yabo kwaye ndicinga ukuba intetho yabo ephambili kwi-SXSW kunyaka ophelileyo ibilungile. Oko kwathethi, bendicinga ukuba ndim ndedwa ofumene iBascamp ingaphantsi kokugqibeleleyo. Ndisayisebenzisa yonke imihla kodwa ndiyaqala ukuyoyika endaweni yokuziva ndikhululekile ukuba ndiwaphule amakhamandela eeapps ze desktop. Ukuya kuthi ga ngoku njengethoni yebhlog yabo, andikwazi ukuphawula kuba ndingumfundi nje oqhelekileyo, kodwa ndicinga ukuba nabani na oqalekisa kwindawo ethi "yingcali" uzama ukuba nzima ukudlala nokupholileyo abantwana.
Epreli 8, 2007 ngo-2: 34 PM
Mna ngokwam ndothuswa kukubabona besebenzisa ibhombu ye-F kwisithuba sabo. Njengoko uchazile ngokuchanekileyo, akuyomfuneko, kwaye ekugqibeleni lulutsha nje. Into "epholileyo" yokuchasana nokuqala yaqala ukunxiba mncinci kudala. Kwakwinto engento ukuba ibhlog yabo, njengoko uSirZ watshoyo, ngandlela zonke, andicingi ukuba nabani na uthi abanalo ilungelo lokwenza njalo, kodwa loo nto ayenzi kube bubulumko, kananjalo Kuya kufuneka ndiyamkele buqu.
Incwadi yabo yayihlekisa ngam. Ukuthetha ngabantu abathile ababenesibindi ngenxa yokuba nesibindi. Ngokuqinisekileyo uninzi loovulindlela kuwo onke amashishini aluhambi kunye nolona luqhelekileyo, kodwa imeko ye-f-off iyahlekisa. Hayi, ukwenza into elula ukuze ube yinto elula AKUSIYO KONKE ingcinga elungileyo.
Bendihlala ndichukunyiswa yiminqweno yabo yeeRails, okanye ukusilela kwayo kuloo nto. Iimpawu ezingama-37 ziye zatsho izihlandlo ezininzi ukuba abafuni iiRails ukuba ziqheleke okanye "ziphumelele kakhulu", kwaye abalandeli bayayitya bayigqibe. Ngokuqinisekileyo… kwinqanaba leenqununu elinokuba lilungile… kodwa masibe nethemba. Omnye wemiceli mngeni emikhulu ajamelana nayo uRuby kwaye ngakumbi abaPhuhlisi boololiwe kukunqongophala okuhambelana nokusingqongileyo okuseta ngokulula ukuba basebenzise. URuby akanalo nje ubhiquity eyenziwa yi-PHP, okanye iPython. Nangona uphuhliso lunokuba yinto oyithandayo, ndiyenza ikakhulu ukwenza imali. Ndinethamsanqa lokuba ndenze into endiyithandayo ukuze ndiziphilise, kodwa kusafuneka ndihlawule amatyala kwaye ndondle abantwana. Ukucela abantu ukuba babeke ukholo olunjalo, umgudu kunye nobutyebi kwinto ethile, kwaye emva koko ubaxelele ukuba awufuni ukuba ibe yimpumelelo njengoko inokuba njalo… oko ke kuyandisa inzuzo yokusetyenziswa kwayo… kubonakala ngathi kukungxama kum.
Iimpawu ezingama-37 kwakudala zatyhefiswa yi-hubris. Ndiyamangaliswa ukuba kuthathe abantu ixesha elide ukuba baqale ukuyibona. Zikhona njengomatshini wokuthengisa ikakhulu kubo.
Epreli 8, 2007 ngo-2: 54 PM
Enye into endifuna ukuyibonisa uSirZ. Ngaphandle kwesikhundla sikaKarr njengomthengisi we-imeyile, andizukuhlazisa izimvo zakhe ngokungqalileyo. Kananjalo qaphela ukuba oko kuyamvumela ukuba abe nokuqonda kunye nolwazi malunga nomzi mveliso kunye nokuba yintoni esebenzayo ngakumbi ngaphezulu kunabanye, kubandakanya wena, kunye neempawu ezingama-37. Izimvo zizodwa azikwenzi mali, iziphumo zikwenza ube nemali… kwaye ukuba iindlela zikaMnu Karr zizisa iziphumo, ungubani wena ukuba ungazihlaziyi?
Epreli 8, 2007 ngo-2: 56 PM
Ndiyavuma kwithoni yebhlog yabo ukuba nayo 'yazi konke' kwaye uphulukane nomnqweno wokufumana konke kulungile. Ndivile ukuba kulwaziso lwe-Highrise eyayichukunyiswe kakhulu, kwaye ikalwe kakhulu ngoku njengokuba siyibonile. Ndisenayo iakhawunti yam yeBasecamp, kodwa ndibukele ngononophelo.
Epreli 8, 2007 ngo-3: 35 PM
Inye into endicaphukisayo malunga ne-37signals yi-1,000,000 Basecamp yomkhankaso wabo wokuthengisa. Ayinyanisekanga kwaphela, kuba ndinethemba lokuba ipesenti enkulu ayingobasebenzisi abasebenzayo.
Ndineeakhawunti ezi-4 zeBasecamp ubuncinci, kwaye ndisebenzise enye yazo kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo. Njengawe uDoug, ndiyabona ukuba kwiprojekthi nganye bekukho abasebenzisi abambalwa abangazange bangene ngemvume, okanye bangene kanye okanye kabini ukuze bayikhangele.
Kwaye kuba akukho demo iphilayo, ndiqinisekile ukuba abantu abaninzi babhalisela iakhawunti yasimahla ukujonga nje isoftware, kwaye bagqibela ngokungayisebenzisi into eyinyani.
Epreli 8, 2007 ngo-4: 50 PM
Inqaku elinomdla ngokwenene, liyandikhumbuza ngokubalwa kwababhalisi bephephandaba;). Ndiyamangaliswa ngokwenene yindlela enkulu abasabela ngayo kule posi! Kubonakala ngathi bambalwa abantu ababelinde iqonga ukuze babonise ukungoneliseki kwabo.
BTW… omnye umntu endithetha ngaye ibinguwe. 😉
Epreli 8, 2007 ngo-6: 03 PM
Amanqaku anomdla. Enkosi ngenqaku. Soloko unomdla ukubona enye indlela yokujonga izinto (uninzi lwezinto umntu azifundayo malunga neempawu ezingama-37 ezikwi-Intanethi ludumo oluqaqambileyo).
Ekugqibeleni ndiyirhoxisile iakhawunti yam yeBasecamp, kodwa ngaphezulu ukwenza nenyani yokuba ukusebenza bekungeyiyo le nto ndiyifunayo.
Unokufumana eli nqaku linomdla:
Iimpawu: I-Bloat yeshishini ngokuchasene neBlog Bloger
Epreli 8, 2007 ngo-10: 33 PM
Sitshintshile ukusuka eBasecampe saya simahla (kwaye silula) iTaskFreak kwiveki ephelileyo. Siyayithanda, kwaye asijongi emva.
Epreli 9, 2007 ngo-4: 03 AM
Oku kundikhumbuza ukuba kufuneka ndirhoxise iakhawunti yam. Khange ndiyisebenzise iinyanga kwaye ibisoloko yenye yezinto endifuna ukuzisebenzisa kodwa khange ndiyenze.
Epreli 9, 2007 ngo-9: 39 AM
Ndiyirhoxisile nayo ngoku.
Ayisetyenziswa rhoqo, kwaye abathengi bam (njengoko kungqinwa yimihla yokugqibela yokungena). Ndibatsalele umnxeba ngale ntsasa, ndibuza ukuba andizukuqhubeka nokuyigcina. Ndothukile (?) Bonke (4) bathi HAYI!
PS, imeyile yam kubo:
“Ayinanto yakwenza nayo yonke le mpikiswano, 'f-word',
ungaqalekisa yonke into oyithandayo, nam ngokunjalo…
Ingxaki kukuba ndizibambe ndiqalekisa NGEXA ndisebenzisa
izixhobo zakho kwaye ndikufumene kunzima ukufumana / ukugcina
abathengi bam basebenzise i-BackPack.
Kutshanje ndiphulukene neprojekthi / umxhasi phakathi kweendlela ngenxa yokubi
Unxibelelwano (kunye ne-BackPack idlale indima enkulu koku).
Udliwanondlebe olungacwangciswanga ngale ntsasa luveze ukuba BONKE abanye abathengi bam bebeziqalekisa, ngokunjalo isigqibo besilula…
I-FYI, ezinye zeempawu zam / ezithandekayo:
-Udityaniso lwe-imeyile kunye nokuhamba kweprojekthi 'eqhelekileyo' kubi /
ayikho (kubonakala ngathi i-imeyile ye-HighRise ye-cc isenokuba yiyo
Isiza sicotha kakhulu
-Uguqulelo lwefayile alonelanga kwaye lusisiseko
-Izixhobo azidityaniswanga ngokufanelekileyo (iibhodi ezibhaliweyo, unyaka omnye kamva, iseyifriggin 'meta-refresh?
-Iibhodi zokubhala, eyona ndawo ndiyithandayo yesiza sakho, enesifo se-buggy, izixhobo zokufomatha ngokulula (umthengi omnye undixelele ukuba uchithe iiyure ezininzi ezama ukufumana uluhlu lweebhulethi ezingenanto)
Okokugqibela kodwa ngokuqinisekileyo kungaphelelanga apho, njengoko sendifumene nje, ukuthunyelwa kwedatha KUKHO NGOKUQHELEKILEYO. I-WTF iyakukhathalela ukuthunyelwa ngaphandle kweXML, kodwa kusafuneka ndikhuphele zonke iifayile ngokwahlukeneyo, ndigcine iibhodi ezibhaliweyo ngokwahlukeneyo, njl njl.
Wawukhe wangaphambi kwegophe, kodwa la ngamaxesha akhawulezayo kwaye ndicinga ukuba lixesha lokuba uzichaze ngokunyanisekileyo. ”
Epreli 9, 2007 ngo-10: 34 AM
Kwirekhodi esingazange sathi "silungile, wonke umntu ugwenxa" kwaye asikholelwa ukuba "silungile, wonke umntu uphosakele"
Sabelana nje ngento esiyisebenzeleyo. Ukuba konke kuyakusebenzela, kuhle. Ukuba enye iyakusebenzela, intle. Ukuba akukho namnye okusebenzelayo, mkhulu. Thatha naliphi na ixabiso olifumanayo kwaye ushiye okuseleyo ngasemva.
Unokufuna ukuphonononga esi sahluko kwincwadi yethu:
"Uthatha kakhulu umbono omnyama nomhlophe."
Ukuba ithoni yethu ibonakala ngathi iyazi-konke, sinyamezele. Sicinga ukuba kungcono ukuveza izimvo ngokungqindilili kunokuba ube nomnqweno malunga noko. Ukuba oko kuphuma njenge-cocky okanye ikratshi, makube njalo. Kungcono sibe ngabanokucaphukisa kunamanzi yonke into phantsi “kuxhomekeke…” Ewe kuyakubakho amaxesha apho le mithetho ifuna ukolulwa okanye yaphulwe. Kwaye amanye ala maqhinga anokungasebenzi kwimeko yakho. Sebenzisa umgwebo wakho kunye nomfanekiso-ngqondweni.
Epreli 9, 2007 ngo-11: 24 AM
Okokuqala-enkosi kakhulu ngokuphendula. Khange ndicinge ukuba le post incinci iyakususa njengoko yenzile. Ndiyathemba ukuba ungakhangela ngaphaya kwento oyichasayo kwincwadi yakho kwaye umamele izinto ezithethwa ngabantu abambalwa kule posi.
Kuba ucaphula incwadi yakho, ndiza kufaka izingqinisiso ezimbalwa:
1. Kubonakala ngathi awuzange wenze njalo uqeshe abathengi abafanelekileyo.
2. Eyakho ubuntu bemveliso yakho inokuba neziphene ezifuna ukujongwa.
3. Ukukhwela iBlog Blog ine ups and down zayo.
Njengoko benditshilo kwiposti yam yantlandlolo-Ukufumana iNyaniso kumile kuvavanyo lwexesha kwaye ndisengumlandeli omkhulu. Ndingacel 'umngeni iqela lakho ukuba liphonononge umbono webhlog yakho, nangona kunjalo. Kubukhali ngenene kwaye ndiqinisekile ukuba inokuthotywa ezantsi ukunceda ukufundisa abanye kwaye ungangxoli kubo.
Epreli 9, 2007 ngo-11: 19 AM
Okwam, ndiyekile ukuba ngumthengi we-37S ngokusekwe kumava enkxaso. Emva kokuba nengxaki yokuseka ezinye iiprojekthi zeBascamp, ndibhalele ukubuza ukuba kutheni iiprojekthi zibonisiwe njengezabathengi bam kunam. Impendulo yayiyi-liner enye ecaleni komgca ka "Hi Todd. Iprojekthi inxulunyaniswa nomxhasi kuba iprojekthi inxulunyaniswa nayo ”okanye into esondelelene noko. Isetyhula, ukungancedi, kunye neemayile kude nesidingo sokwenyani, esasiza kwazi indlela yokutshintsha (duh).
Isicelo sesibini senkxaso sifumene unyango olufanayo- ukukhawuleza, ukuya kwindawo yokuphendula engenzanga nto ukunceda, kumgca "yindlela ekuyiyo kuba kunjalo." Isicelo sokwenza utshintsho kwisoftware kunxibelelwano lwenkxaso asiphendulwanga.
Ukundithathela yayiyimvakalelo yokuba 'ukuba unengxaki yoyilo lwethu, yiya kwenye indawo,' okanye ubuncinci ungazibhali.
Epreli 9, 2007 ngo-12: 21 PM
UDouglas, ibhlog yethu iye yafana ukusukela ngo-1999. Ibhlog yethu inelizwi elifanayo esilisebenzisayo ukuthetha phakathi kwethu. Asizenzeli abantu abanxibayo ukunxibelelana noluntu. Singobani thina-kokubini kunye nangaphandle kweqonga. Asizenzi izaba. Siyazingca kakhulu ngaloo nto. Ndinqwenela ukuba abantu kunye neenkampani zinjalo.
Sabelana ngezimvo zethu ngaphandle kwesihluzo. Yindlela esihlala senza ngayo izinto kwaye sizakuqhubeka sisenza izinto. Siyakholelwa ukuba kungcono ukuba nguwe kunokuba ungomnye umntu- nokuba imeko ithini na. Ngamanye amaxesha siyathuka. Idili enkulu. Ngamanye amaxesha usibiza ngokuba "asazi nto." Idili enkulu. Zombini ziyacaphukisa ngokulinganayo ukuba ujonga ithuba lokukhubeka.
Asikaze sizame ukonwabisa wonke umntu. Siyaqonda ukuba abanye abantu abayithandi indlela esithetha ngayo okanye indlela esicinga ngayo okanye indlela esenza ngayo. Ilungile. Baninzi abantu abangakuthandiyo. Ilungile. Obo bubomi.
Kuba unengxelo kuthi, ndinempendulo kuwe. Uthe: "Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ibhlog yabo yazisa enye into ngokungazi." Malunga: http://www.37signals.com/svn/posts/357-people-dont-scrollemails
Ngaba abantu abavumelana nathi kwizimvo abazi nto nabo? Ngaba ukhululekile ukubiza bonke aba bantu ngokungazi? Ngaba uRichard Bird akanalwazi? Ngaba uSteven Bao akazi nto? Ngaba uBen Richardson akazi nto? Ngaba u-Amie Gillingham akazi nto? Ngaba uDave Rosen akazi nto? Ngaba uScott Meade ovela kwiConcept wabelana ngokungazi? Ngaba u-Anthony Casalena wase-SquareSpace akazi nto naye? Ngaba uJosh Williams waseBlinkSale akazi nto? Ngaba ungathumela uluvo kwibhlog yakho okanye eyethu usithi bonke aba bantu abazi nto nabo? Okanye awuyi kuma emva kwamazwi akho? Uthetha ukuba uthini?
Ngaba uRyan akazi nto ngokuthumela le nto?
Unokufuna ukugcina "ukungazi" ngezimvo ezizifaneleyo ezinje ngobuhlanga, ubuntamo, ubundlobongela- hayi uluvo lomntu kubude be-imeyile.
Epreli 9, 2007 ngo-12: 45 PM
Ewe abo bantu abazi nto. Abanayo ipulpiti yokuxhaphaza ibhlog yakho. Baphawula ngokulula kwaye baxhase ngokusekwe kuluvo lwabo. URyan akazi nto, nokuba. Unika uluvo lwakhe ngokunjalo. Ndiyayihlonipha lonto. Ewe, kwabanye, loo mbono iyinyani. Mhlawumbi abo bantu baye bavavanya kwaye bafumana impumelelo ngale ndlela.
Iposti yakho khange iboniswe njengoluvo, yaziswa njengenyaniso. Ndiyakholelwa ukuba yayingazi. Ukungazi kuchazwa njenge uswele ulwazi okanye ulwazi malunga nomxholo othile okanye inyani. Ayinanto yakwenza nobuhlanga okanye ubuhlanga, njl.
Ngokunyanisekileyo, akukho mfuneko yokuphendula, uJason. Ukujonga impendulo yakho, amabango am ayinyani. Ithoni itshintshile. Yinto embi kakhulu leyo. Ngethamsanqa kuwe nakwinkampani yakho.
Epreli 9, 2007 ngo-12: 42 PM
Ndicinga into yokufunga yinto engekhoyo. Kule meko, yongeze ugxininiso olufanelekileyo. Asingobantwana. Sithetha kanjalo. Okanye ubuncinci ndiyayenza.
Kodwa ibhlog yeZimpawu ezingama-37 iyandibetha njengokuzenzisa. Uhlobo loku "sibonile ukuba ayilunganga kangakanani le nto" vibe.
Epreli 9, 2007 ngo-1: 20 PM
UDouglas, ngoku uvakala ngathi ulahlekile. UJason uza kwibhlog yakho ukushiya izimvo zakhe kwaye ngoku umxelela ukuba angaphenduli? Luhlobo luni lokuziphatha komntwana oko?
Ukwafikelela ngokucebisa ukuba iposti kaJason ichaziwe njengenyaniso. Luluvo olusekwe kumava akhe. Yinto op / ed (umbono / wokuhlela). Uphando lwezenzululwazi luyinyani. Andiqondi ukuba uJason angaze athabathe indawo yakhe njengesayensi, okanye inyani, okanye enye into ngaphandle koluvo lwakhe ngokusekwe kumava akhe.
Ngaphambi kokuba ugxeke, kutheni ungambuzi ngobubele ukuba luluvo okanye yinyani? Ndiqinisekile angakuvuyela ukukuphendula. Emva koko uya kwaziswa ngakumbi malunga nenjongo yakhe. Unokwenza uqikelelo okanye uyazi inyani.
Okokugqibela, andiboni ukuba ungaphikisana njani ukuba umntu omnye akazi nto kodwa abanye abantu abavumelana naye abakho. Ayinamsebenzi ukuba ngubani othe kuqala okanye bayithetha phi. Bonke bayavuma. Amagqabantshintshi ayasixhasa isikhundla sikaJason. Ke unokukholelwa ukuba bonke abazi okanye akukho namnye kubo ongenalwazi. Awunakho ukukhetha icherry xa bevumelana bonke.
Epreli 9, 2007 ngo-2: 20 PM
1. Re: Ulahlekelwe kakhulu - Ngaba buhlungu? Ewe. Ndabhala iposi ndizisa ezinye iinkxalabo zam njengomthengi wangaphambili kwaye umnini wenkampani uza kwibhlog yam kwaye uyabagxotha. Ukwagxotha wonke umntu ophawule kakubi. Ngelishwa-bendinethemba lokufumana ngaphezulu. Mphulukwa? Ewe. Ndiphulukene nexesha kunye nemali yotyalo-mali kwisixhobo endingasakwaziyo ukusisebenzisa.
2. UJason wathi olu yayiluluvo, kwaye walandelisa ukuba iSahluko 1 sencwadi yakhe sichaza ukuba ibhlog yoluvo. Okwam ngcamango (olo luluvo lwam) kwahlukile kwaye ndakuchaza njalo.
3. UJason wathi luluvo apha, khange kufuneke ndimbuze. Kananjalo, khumbula isizathu sam sokushiya yayingengombhalo nje-yayiyindlela yokuvela kwetoni kunye nelahleko yentlonipho ye-SvN kunye nokungasebenzisi isoftware ekhokelela ekubeni ndihambe. Kwakungekho nawuphi na umcimbi, uninzi.
4. Re: Ukungazi: Uxhasa ingxoxo yam ungakhange uyiqonde. Ukuba i-SvN ibeka ingxelo yengubo yokuba akukho mntu uskrola i-imeyile, ngoku abantu banokuyijonga njengeyinyani ukuba ithiwe thaca ngale ndlela. I-SvN ayinalwazi ngaloo ntetho, abaxhasi abayiyo. Banokuthi baxelwe ngokungeyonyani, kodwa bayazi. Yisona sizathu sokuba ndicele umngeni kwithiyori ye-SvN- iibhlog kufuneka zibanjelwe ukwenza uxanduva xa 'izimvo' zazo zinikezelwa njengenyaniso.
Epreli 9, 2007 ngo-1: 41 PM
abanye abantu babonakala bengazi ngokungazi.
Epreli 9, 2007 ngo-2: 25 PM
Enkosi, Lupe. Ngelixa ndingakhangeli kwiWikipedia kuzo zonke iimpendulo zam, ndiyayithanda ikhowuti:
Enye inkcazo ithi ukungazi kukukhetha ukungazenzi okanye uziphathe ngokungqinelana nolwazi oluthile ukuze uhambelane neemfuno zakho okanye iinkolelo.
Oku, ngokoluvo lwam, kutheni i-imeyile yokuSkrolela iposti kwi-SvN yayingazi. Bakhethe ukungaphandi okanye babonelele ngedatha efanelekileyo yokuxhasa ithiyori yabo. Kwaye, enyanisweni, iyazifanela iimfuno zabo kuba babeplahla ifomathi entsha ye-imeyile.
Epreli 9, 2007 ngo-2: 04 PM
Ndiyayixhasa imbono yakho… kwaye nantsi enye ingxoxo evela kwiintsuku zam eAmerican Express- ukuvavanya ithiyori "yabasebenzisi abayikroli". Ndinee-URL ezahlukileyo ezifakwe kwikhonkco ngaphezulu kwe-imeyile kwaye ezantsi, kulungile, "ngezantsi komhlathana." Kwaye ezantsi zazicofwe ngokufanayo nangaphezulu. Ithetha kumgangatho kunye nokubaluleka komxholo. Ukuba umxholo wakho awufanelekanga, umsebenzisi uyazi ngaphakathi okokuqala kwaye ngenxa yoko uyeke ngaphandle kokufunda ngakumbi. Ii-imeyile zam eziqulathe izibonelelo, iingcebiso, kunye nendlela yokwenza i-cardmembers zeshishini elincinci, endaweni yokubhengeza iintengiso okanye ii-ads, zihlala zibona isixa esihle (okt ukuya kuthi ga kwi-70%) konqakrazo luvela kwikhonkco ezantsi kwe-imeyile.
Ndizamile i-basecamp yeprojekthi yomthengi, kwaye ngelixa besithumela amaxwebhu amaninzi kwithala leencwadi / kwindawo yokugcina izinto, ndigqibele ngokwenza ukuba umthengi atshintshele kumaxwebhu kaGoogle endaweni yoko. enkosi ngezimvo zakho.
Epreli 9, 2007 ngo-3: 39 PM
Kutheni ubiza umntu ongazi nto malunga noluvo lwabo malunga nobude be-imeyile? Amagama amnandi anzima apho kuluvo lomntu. Ukuba awuluthandi uluvo lomntu, liphi ixabiso ekubhaleni ixesha elide malunga nalo kunye nokutsala umdla wakho wokungaqhelekanga ngokubonisa ukungazi kwabantu? FUMANA IT NGOKU.
Wenza ubunzima obukhulu kumntu omnye wenza inqaku kumava akhe! Nceda ube ngumntu omkhulu kwaye uqhubeke.
Epreli 9, 2007 ngo-3: 51 PM
Ndiqinisekile ukuba loo mibuzo sele iphendulwe.
Epreli 9, 2007 ngo-6: 23 PM
Ngaba niphumile ezingqondweni zenu ?! Ndityala amandla amaninzi ekufumaneni iindlela zokuba abasebenzi bam bachithe ixesha elincinci besebenzisa ii-imeyile, kunokuba ngaphezulu. Ukufikelela kwinqanaba: I-imeyile ngoku sisiphazamiso esingalawulekiyo. Kutheni, eMhlabeni, ngaba umntu enokuphakamisa ukuba ubunzulu be-imeyile yinto enqwenelekayo?
Epreli 9, 2007 ngo-6: 47 PM
Abasebenzi bachitha ixesha elincinci kwi-imeyile kunye nexesha elininzi emnxebeni okanye ubuso ngobuso kunemveliso ngakumbi, ndiyavuma.
Ndingathanda ukusika ivolumu yeimeyile endinazo ngesiqingatha, kodwa ubude bomxholo kweziimeyile awunqunywanga kwaye womile. Ndicinga ukuba zikho izizathu ezifanelekileyo zokuba nekopi ende ithelekiswa nekopi emfutshane. html vs. isicatshulwa, njl.
Ukuba sifuna ukonga ixesha ekufundeni, masisuse iikhontrakthi kunye nezinye izinto ezisemthethweni ze-mumbo jumbo. La maphepha achitha ixesha elininzi kwaye asibize ngaphezulu ngeyure ukuhlawula amagqwetha ukuba awuqonde!
Epreli 9, 2007 ngo-8: 29 PM
Ewe, ndizamile ukusebenzisa i-basecamp kwenye yeeprojekthi kwaye akukho namnye kwiqela lam uthenge kuyo. Mhlawumbi yayiyindibaniselwano yeprojekthi, kodwa ndafumanisa ukuba nangona bendizimisele ukubeka ixesha ekuqondeni ujongano lwe-quirky, uninzi lwabantu kwiqela lam alunjalo.
Kwakunzima ngenene ukutshintsha amanyathelo kwaye ukuba imisebenzi ethile ixhomekeke komnye, kwaye waphoswa zizinto ezimbalwa kwakungekho ndlela yokulungisa imisebenzi njl.
Ndonwabile ukuba ndisebenzise nje uhlobo lwayo lwasimahla kwaye andizibophelelanga kulo ngokuthenga ingxelo ehlawulelweyo. EMVA kwethutyana, ibindim ndedwa osebenzisa ibhodi emhlophe njlnjl, kwaye ndisebenzisa ezinye izinto zenkqubo ye-IM (enye yemveliso yazo). Ukuzama kwethu nge-basecamp njengesixhobo solawulo lweprojekthi yayikukungaphumeleli. Ujongano luhlobo lwe-quirky kwaye aluhambelani ncam (ukusukela kwiinyanga ezi-8 ezidlulileyo -Andikangeni ngoku kutshanje ndicinga)
Ndicinga ukuba banambitha kakhulu i-koolaid yabo kwaye yonke le ndlela yam okanye indlela yendlela ayizukusebenza kwixesha elide. Ndiyathetha, ukuba uthi ubeka abathengi bakho phambili, ungabajongela phantsi njani phantse onke amathuba kwaye ubaphathe ngayo yonke into ngokungathi uyayazi inyani kwaye wonke umntu uyimpazamo. ?
Epreli 9, 2007 ngo-9: 27 PM
"Ibhombu f"? Yeyiphi intengiso ** che.
Ndiqinisekile ukuba i-37signals iyakhathala ukuba i-turd enamehlo aqaqambileyo ayikhangeli ukukhotha i-*** s kwakhona.
Sukuba nexhala… Ndiqinisekile uyakufumana ibhendi entsha yokutsibela ngoku ukuba ii-37signals azisekho kwimfashini kwakhona.
Epreli 9, 2007 ngo-9: 54 PM
Yhu uFrank! "Turd in a suit" - lonto indenze ndahleka. Nceda uxolele ukuhlelwa, abanye abafundi bam abanokungayixabisi into ehlekisayo.
Epreli 10, 2007 ngo-4: 44 AM
Ndisebenzise i-Basecamp kubo bobabini abaqeshi bam bokugqibela. Ndiye ndagxeka kakhulu kuyo, ubukhulu becala ngenxa yokuba uJason Fried & co banobuqili obungenangqondo kwaye ngokungathandabuzekiyo zonke iiapps zabo zikwisiseko sedatha esinye kunye ne-UI eyahlukileyo eya ngasemva. Ngelixa ndandikhalaza ngabo, ikwangoyena msebenzisi ubalaseleyo we-basecamp. Rhoqo bendiza kubuzwa "aphi amaxwebhu ale nto?" kwaye ndiphendule, “kwi-Basecamp… apho ikhoyo… akunjalo?” Ekugqibeleni eyesibini kuye kwafuneka ndisete i-wiki yendawo, ethi ifumane lot ukusetyenziswa ngakumbi kuba kubonakala kunzima ukufumana ulwazi kwindawo yokugcina ulwazi ebhalwe kwifomathi. 🙂
Ukusukela oko ndiqalise ukuzimela, ndihlala ndicinga ukuba kuya kufuneka ndiyokufumana iakhawunti yekampu ndiyibeke ecaleni, ndiyilinde ukuba ibe yimfuneko. Akukabikho mfuneko okwangoku… kwaye ngoku ndicinga ukuba ngekhe.
Epreli 10, 2007 ngo-5: 03 AM
Andiqinisekanga ngokupheleleyo ngale nto, kodwa ukusetyenziswa kwegama-f kunokukhuthazwa yimidlalo yeNyoka kwiNdiza eyayisebenzisa eli gama ngokugqithileyo. Umboniso bhanyabhanya ngamanye amaxesha ubhekiswa kuwo njenge "Nyoka kwi-af ****** g moya" ngenxa yoku.
Andikhathali ukuba abantu baqalekisa kwiwebhu ukuba nje ikumda kunye nomxholo. Ukuba akunjalo, ndiyayihoya.
Epreli 10, 2007 ngo-7: 30 AM
Ngama-24, ukuba ngumboniso wosapho lonke, abavumelekanga ukuba baqalekise. Inkcazo evumelekileyo kuphela yokukhathazeka "Yilahle" - eyaphakamisa abanye abafundi beekholeji ukuba baqale umdlalo wokusela isibhamu ngexesha ngalinye i-Agent Bauer isebenzisa loo binzana.
Xa ababhali befumanise ngale nto, baqala ukondla imigca eyayiyi "damnit damnit damnit" ukubona nje abo bantwana bechitha i-3 shots zilandelelana.
Ukubuyisa uburharha kule ngxoxo.
Epreli 10, 2007 ngo-8: 51 AM
Impendulo yam ku "Ukufumana okwenyani" inokuba ibikade ifike ngaphambi kwexesha kodwa iya ifaneleka: Umxholo wayo upholile ngokuba ziimpawu ezingama-37 kwaye uthengise i-19 yeedola kwi-PDF kwindawo enkulu engahlanjwa.
Gcina iliso lakho kwi-ORGware
yesibhengezo, soooon. Iya kuba sisixhobo osifunayo.
Nantsi iBhodi yethu yaBacebisi.
Epreli 10, 2007 ngo-9: 09 AM
baphila ngekrele, kwaye ngoku, kulungile… ..
Epreli 10, 2007 ngo-9: 46 AM
Mka Douglas Karr. Andikholelwa okomzuzu wokuba 'i-f-bhombu,' njengoko uyibeka ngokuhlekisayo, ayisosizathu sokuba ulahle isoftware. Uchithe uninzi lwenqaku uzama ukusiqinisekisa ukuba ibingelilo kwaye usilele ngokucacileyo. Ndicinga ukuba nayiphi na indoda encinci yokuthetha, ungaze ucinge ngeblogger 'yetekhnoloji yentengiso', ngeyayichazile into exhalabisayo ukuba ikho.
Njenge 'ngcali yetekhnoloji yokuthengisa', kunokwenzeka ukuba ungumthengisi weoyile yenyoka. Ukuya kuthi ga ngoku ndinokukuxelela, kuya kufuneka ukuba ube mbi kakhulu kuyo.
Mka Douglas Karr. Ujongeka u-goofy nyani.
Epreli 10, 2007 ngo-12: 55 PM
Ngaba ndibonakala ndibukeka? Dang, yayiyeyona pic yam intle!
Epreli 10, 2007 ngo-2: 03 PM
… Kulungile, ndiyaqikelela ukuba ubuciko bale mpendulo buyazithetha.
Njengomfundi wexesha elide webhlog kaDoug kuye kwafuneka ndicofe ngaphakathi kuthi akaze ahlangane nobugqwetha.
U-Jeez, andikaze ndingene kwi-37signals, kodwa kwindlela ekhuselekileyo yokukhusela, andizukutsalwa ngumnqweno wokufumana okungakumbi ...
Epreli 10, 2007 ngo-9: 59 AM
@John Beeler: Uyayazi le nto yokwenza lo msebenzi inomdla kakhulu. Ndiyamangaliswa kukuba kutheni zonke ii-rails zokusebenza zijongeka ziphantse zaneengxaki zokusebenzisa. (Kwaye kufuneka "uyithathe" kuba i-DHH okanye enye ipontif wannabe ikuxelele njalo ..)
@defenders of the cult: I-SvN kunye nabanye beli qela-kholo bebesoloko bethetha nabantu. D. Karr unendawo? iphi idatha exhasayo okanye uxwebhu? Ewe, ndiyayibona inqaku lokuba UKUBHALISWA KWAMA-IMEYILI, kuyanceda ukubenza baqonde kwaye bafikelele kwinqanaba, kodwa uyazi, ii-imeyile zokubhalisa zikwabalulekile kwaye abantu banengqondo eyaneleyo yokufumana nokubeka phambili ngokubhekisele kuloo.
Ngokwam, xa ndifumana i-imeyile yobhaliso, yithi umniki-nkonzo, kwaye inamaphepha ama-3 ubude, akukho ngxaki, andifuni ii-imeyile ezahlukeneyo ezine ezindixelela ukuba iakhawunti iseti, enye indixelela nge-id yam enye indixelela. ukuba ndingalufumana phi uncedo kunye nenkonzo yabathengi kwaye omnye endixelela nge-url kwi-webgui yokulawula iakhawunti yam. Leyo yindlela enqabileyo kakhulu.
Into endiyiqapheleyo malunga ne-37S kukuba bayaphula imithetho yabo kwaye oku kugqitha kwiRails kunye ne-SvN kunye nazo zonke ezinye izinto ezixhasayo (i-TextDrive kunye ne-Textmate nabani na?)
Oololiwe bathi BOMILE kodwa sisiqhulo esoyikisayo! Yonke usetyenziso ifuna ikopi yayo yesakhelo! uyaziqonda iimpembelelo zoku? Jonga ii-RailsDay2006 zokungena. Amangenelo angamakhulu amabini azakuthatha phantse i-1.5 GB yendawo!
Olu lolwaphulo-mthetho olugqwesileyo kumgaqo we-DRY.
Epreli 10, 2007 ngo-1: 30 PM
Ndiyabona ukuba sele kunengxoxo eninzi apha, kodwa bendicinga ukuba ndingongeza iisenti zam ezimbini. Andikhathali ngesiqalekiso. Ndiyayithanda imbono. Uluvo luphela lwamagama athile alukrwada kunabanye luyisidenge.
Kodwa ayisiyiyo eyona nto iphambili. Ndiwubonile ngokuqinisekileyo umba kubafana be-SvN. Ukuba uxela into, yitsho ngokuzithemba kwaye ayiyizinkcenkcesheli loo nto ibonakala ixhaphakile. Ukuba uqinisekile ngento ethile, yitsho njalo, kwaye ungathethi enye into.
Nangona kunjalo, ndingongeza into kwinto endicinga ukuba ayikho kule meko. Ukuba ubuphazamile ngento ethile, yamkele kwaye uqhubeke. Akukho nto imbi ngokungahambi kakuhle. Isenokuhlaba kancinci, kodwa ukufumana into elungileyo kufanelekile. Ukuba uthatha uluvo lokuba 'silungile kwaye kunjalo' ushiye indlela yokucinga kwaye wangena kummandla wemfundiso. Anditsho ukuba abafana be-SvN bayenzile loo nto. Ngokucacileyo, banoluvo kakhulu malunga nento abayenzayo, esebenza kakuhle kubo.
Elinye inqaku olwenzileyo kwiposti yakho yoqobo, endicinga ukuba kufanelekile ukuyiphinda kukwenziwa kwebango ngaphandle kwedatha yokulixhasa. Kubaluleke kakhulu ukuba idatha ibekhona. Ingqondo eqhelekileyo ayiqhelekanga, kwaye, njengoko amava esifundisile, inokuba iphosakele ngamanye amaxesha. Omnye wemibuzo ebaluleke kakhulu umntu anokuyibuza uthi: "Ewe, iyavakala le nto, kodwa ngaba iyabonakalisa ubunyani (ngaba ikhona idatha)?"
Khange ndikwazi ukufumana abantu endisebenza nabo ukuba basebenzise i-basecamp, kodwa andiqinisekanga ukuba ngaba yingxaki ye-Basecamp, okanye uninzi lwabantu alusetyenziswanga / lukulungele ukusebenzisa usetyenziso lwe-Intanethi kweso sikhundla. Ngokuqinisekileyo, abantu basebenzisa i-imeyile kunye nezinye iinkqubo ngaphandle kokucinga ngayo, kodwa ukuyisebenzisa rhoqo kuthatha uqeqesho lokwenyani, kwaye ngaphandle kokuba unamathela kuyo, kuya kubonakala ngathi ayiqhelekanga. Ndisebenza kwiDyunivesithi kwaye iFakhalthi / abasebenzi apha ngokuqinisekileyo bayimele loo nto. Abasetyenziselwa ukuba nezixhobo ezikhoyo ezifumanekayo ngoku, kwaye abayi kuthatha ixesha lokuzifunda. Kwaye amaxesha amaninzi akukho mfuneko.
Epreli 11, 2007 ngo-9: 19 AM
Ndizamile ukuthengisa i-Basecamp kumthengi kube kanye, bakhethe inkqubo * yesandla * emva kokuyijonga.
Epreli 11, 2007 ngo-12: 25 PM
UDouglas-ukuba ujonga isiqalekiso-simahla, i-imeyile ye-imeyile enokubakho unokujonga ulawulo lwethu olukhokelayo kunye nemveliso yokuthengisa- http://LeadsOnRails.com. Nangona kungenjalo iapps yedesktop, ibilokhu kwaye iyaqhubeka nokwakhiwa ukusuka kubathengi behlabathi lokwenyani ekuphulaphuleni abasebenzisi abanjengawe.
Epreli 11, 2007 ngo-3: 11 PM
Ndicinga ukuba yinxalenye ye-37s yi-DHH.
Malunga nonyaka odlulileyo bekukho iposti kwibhlog yakhe (ngcinking.com) ngokusisiseko ukutyibiliza nayiphi na inkqubo enokukhetha ukuba nomsebenzi we-9-5 kunokuba ujoyine ukuqala kunye nokusebenzisa iiRails. Yayikwimo efanayo engacacanga (ukuya kuthi ga kwiitoni zewebhu) - ukuba awuvumelani nam usisidenge.
Epreli 22, 2007 ngo-7: 11 PM
Ndiyakhumbula ndibona le post kunyaka ophelileyo kodwa ingeyiyo le furore ilandelayo. Ngelo xesha bendinezinye izinto ezihleli engqondweni yam kodwa ngoku ndibuyele umva koku kufuneka nditsho ukuba iintshukumo ezingama-37 zishiye incasa embi emlonyeni.
Kukho into ephakamayo ngesimo sabo sengqondo. Ewe ukuzenzisa kunokuba yinkcazo elungileyo. Ndibe kwisiphelo sokufumana ezinye ii-imeyile ezingathandekiyo nezingathandekiyo ezivela kuJason kwaye ndingumsebenzisi oqhelekileyo.
Ngokuqinisekileyo amandla abo kukwenza uphawu kwaye ngenxa yoko ndiyavuyisana nabo. Kodwa izenzo ezinje ziyabonakalisa kubo kwaye ngokucacileyo ngaphezulu kunokuba baziqondayo okanye banomdla wokuvuma.
Yintoni ebonakala ngathi ayiMat ye-37S kukuba iintshukumo / izinto / izinto zithwala intsingiselo *. Ewe ukucaphula nje umntu kunokuthathwa njengokuhlaselwa, ukugculelwa okanye nantoni na. Sithi “khange sitsho….” ayonelanga. Kuyinto engathandekiyo ngokungathandekiyo kwaye inegazi. Ukuthobeka okuthile kuhamba ngendlela ende. Unokuba nayo kwaye uqhubeke "ngokwahluka".
Ukujikela kwiimveliso zabo, ndiyekile ukusebenzisa iBascamp ngokungathandekiyo kuba njengabantu abaninzi ndifumanise ukuba abanye abanamdla. Ndicinga ukuba intetho elula "inokuba sisithintelo. Abantu abawaboni amandla okanye kutheni le nto ingcono kunoluhlu lwee-imeyile. Kwaye ndithetha ngabantu abaqhelekileyo apha abaya kuthi baxhamle ngokwenyani kwisikhukula se-imeyile. Yimveliso elungileyo kodwa ifuna ukuvuselelwa, eyathi uJason iza kuphendula indumiso yam esebenzayo malunga neHighrise.
Nangona kunjalo ndiyathemba ukuba abazukuphumla kwakhona. Kukho iindawo ezimbalwa ezicacileyo kwi-Highrise ekufuneka bezijongile kwaye njengomthengi ohlawulayo-kwakhona-ndiza kubajonga ngokusondeleyo.
Meyi 13, 2007 kwi-4: 34 PM
Iposti enkulu! Nam ndiyirhoxisile iakhawunti yam yesiseko sekhampamu kutshanje. Sukungxama kakhulu ukutshintshela kwi-desktop, nangona kunjalo, kukho ezinye iindlela ezilungileyo zekhampasi ezikhoyo ngoku: Goplan kunye ne-OnStage ukubiza nje ezimbalwa.
Agasti 16, 2007 kwi-1: 19 AM
SirZ endimthandayo, masijongane nayo: asisoze safuna ukuxoxa ngesixhobo kwibhlog yabo ukuba besonelisekile ngayo. Ndizamile i-basecamp kwaye ndiyifumene ingalunganga kwaphela kwiiprojekthi zethu. Ayisisixhobo solawulo lweprojekthi emva kwayo yonke loo nto. Jonga eli nqaku kwiPCworld.com. Ndicinga ukutshintshela koku Qhubeka isixhobo, kubonakala kunomdla ngokwenene.
Umhleli @ WhyBaseCampSux.org
Okt 29, 2007 ngexesha 2:07 AM
Hehe. Ukushumayela kwikwayara. Ewe, ngaphandle kwenxalenye malunga nokuba ngowokuqala ungumlandeli we-37Signals; Andizange ndibe njalo.
Kulungiselelwe abo bafuna iindlela ezizezinye zeBasecamp ndidibanise uluhlu lwam kwindawo yam ye-Basecamp bitch apha:
Ndiyathemba ukuba oku kuyanceda kwabo bafuna izisombululo zolawulo lweprojekthi ngaphandle kweBasecamp.
Okt 29, 2007 ngexesha 7:48 AM
Ngokumangalisayo, ndingumthengi wenkampani esebenzisa iBascamp ngoku. Andazi ukuba ndakhe ndathi iyancanca… ndive nje ukuba iya isiba mandundu kwaye yayingaphili ngokuvisisana nayo.
Njengoko ndiyisebenzisa ngoku, esona sithuba sikhulu kulawulo lomsebenzi kunye nokunikezelwa. Ndingathanda ukubeka phambili imisebenzi, ndibanike, ndifumane uqikelelo ekugqityweni (iiyure kunye nomhla) kwaye emva koko ndifumane iwonga kubo (50%, 75%, 100%). Iimpawu ezikhoyo zivumela nabani na ukuba abeke phambili kwaye abele.
Jan 20, 2008 kwi-12: 40 AM
Ndancamathela kubo ithutyana, kodwa ekugqibeleni bendinabo naba bantu. Ngapha koko ndibeka iposti yam ebhodini namhlanje (iveliswe ngezantsi):
“Ewe, kuye kwafuneka ndiyicimile iakhawunti yam. Kum xa ujonga ukusebenza kwe-HR kunye nokusikelwa umda ababeka kwiiakhawunti zenqanaba elisezantsi, zininzi kakhulu iindlela zasimahla okanye zexabiso eliphantsi apho unokuqhubeka khona. Kuyabiza kakhulu ukuba ufuna ukuyisebenzisa kunye nezinye iimveliso ezingama-37 ezinje ngeBackpack kunye / okanye iBasecamp. Endaweni yokuthatha imveliso ibe nye kwaye uyenze ngcono (umz. Ukongeza ukusebenza kwe-HR kwi-Backpack) i-37s kubonakala ngathi ukhethe indlela apho uphela uhlawula kakhulu kuye kungabikho khuphiswano kwaye akukho nokuba lube luphi ukudityaniswa phakathi kweemveliso. Ndikhe ndadinwa kukuba "siyazi esona simo sengqondo" nxamnye nabathengi benza iingcebiso. Kuyihlazo kuba ukusukela oko ubhaka wafika, i-37s ibindithembise kakhulu, kodwa ngelishwa oko kuye kwaphela. ”
Jan 27, 2008 ngo-2: 02 PM
Esi sithuba sidlale okomzuzwana kodwa bendifuna ukufumana iisenti zam ezi-2. Sixhomekeke kakhulu kwisoftware yethu ye-PM. Isiphithiphithi sayo ukuba asibenzeli abathengi bethu kunye neqela lethu. Ngenxa yokuxhomekeka sisebenzisa iVertabase. Basinika inkonzo enkulu yabathengi, uqeqesho kwaye bagxile kuthi-indlela elungileyo yeemveliso ze-SaaS ezimele ukuba ngayo.
Novemba 25, 2008 ngo-5: 12 PM
I-FWIW, sisandula ukusuka eBascamp saya kwi-SharedPlan. I-SharedPlan Central ijolise kwicala lokucwangcisa ngenkxaso efanelekileyo yokusebenza. Iitshathi zeGantt, ukufikelela ngaphandle kweintanethi ngeapps yemveli yeMac kunye yeWindows kwaye ukuza kuthi ga ngoku, akukho kukhukhumala; ->
Feb 26, 2009 ngo-4: 35 AM
Phantse iminyaka emibini emva kwesi sithuba, ndinomdla wokuva into oyisebenzisela ulawulo lweprojekthi / ukulandelela umsebenzi namhlanje.
Ngaba uhlala wanelisekile (ngokwembono yesisombululo) ngesigqibo sakho sokushiya iBascamp?
Sibonile uninzi lwabantu beza ngendlela yethu (http://www.smartsheet.com) Ukusuka eBascamp kunyaka ophelileyo, abanye becaphula izizathu ezifanayo kwinto obuyiposile ekuqaleni. Abanye babonakala ngathi bafuna isisombululo esikwi-intanethi esingacofisi kangako ukucofa.
Feb 26, 2009 ngo-2: 16 PM
Lo iya kuba ngumbuzo endiza kuwuphendula kungekudala, Phawula. Ndiqinisekile ngokuqinisekileyo ayizukuba yi-Basecamp-nditsaleleke ngakumbi kwizisombululo ze-SaaS eziqhuba ngenkani ngakumbi amanqaku kunye nokudityaniswa kwezicelo zazo. Okwangoku, andenzi naluphi na ulawulo lweprojekthi- kodwa lonto kufuneka itshintshe kungekudala.
Mar 2, 2009 ngo-11: 22 AM
Phuma http://www.teamworkpm.net -Banomngenisi ngaphakathi waseBasecamp kwaye aba bantu baROCK nje! Bathathe iBasecamp kwaye ekugqibeleni bongeze kuzo zonke izinto ebesizicela.
Meyi 11, 2009 kwi-5: 20 PM
I-Basecamp kwiiSteroids, thabatha i-37s fluff 🙂
Juni 15, 2010 ngo-10: 18 AM
Ndiyayiva intlungu yakho malunga nolawulo lweprojekthi, ndiyayithanda kwaye iyandinceda kakhulu xa usenza isenzo sokulinganisa kuphuhliso lwewebhu. UJoomla unomntu omkhulu ohamba ngasemva kwendawo kwaye unokufikelela ngaphambili. Ndiyeke ukuseta oku kwiziza zabathengi, kubonakala ngathi abayisebenzisi. Kumnandi kakhulu ukugcina iiasethi zesiza kunye!
Ndizakujonga i-iGTD bendikhangela into enje kwaye ndinemincili ngesi sixhobo
Nov 10, 2010 kwi-4: 23 AM
Uxolo apha ukukhathazeka. Isoftware ingaphezulu kwetekhnoloji… konke malunga nabantu abakumgca weqhosha. Njengomqeshwa kunye nomsebenzisi, ndiyakukhuthaza ukuba ujonge iClarizen, iwine ngo-2010 kwi-Software Management Software.
Iprojekti yeProjekthi enamandla enezinto ezininzi ezinje ngolawulo lwexesha, ulawulo lwezixhobo, ulawulo lwezemali kunye nokudityaniswa kweNtengiso yeForce, iAdask, uGoogle….
Kufanelekile ukujonga ..
Jan 13, 2011 ngo-6: 58 PM
Ewe, kunamhlanje ndibuyile eBasecamp! 🙂 Enkosi ku @howeleaderhip othe wathetha nam kuyo!
Mar 30, 2011 ngo 8:07 PM
UDoug ukhe wazama nakuphi na kwaba bakhuphiswano bafanelekileyo bathumele apha ngezantsi ngaphambi kokuba ubuyele kwi-basecamp. Ngokwam bendicatshukiswa kakhulu kukungabikho kombutho kunye nokungabikho kwento ebambekayo xa ndongeza abantu baseMac eBasecamp. Ekugqibeleni ndikhubekile kwisisombululo esidibeneyo. Ndiza kuyibiza ngendalo eshishini evumela abantu osebenza nabo, abathengi, abacebisi, abathengisi, abantu abazenzela umsebenzi, amalungu ebhodi ukuba angene kwilungu lokusebenzisana.
Imveliso endiyisebenzisayo ineprojekthi enkulu / icandelo lolawulo lomsebenzi, ikhalenda yokuhlela, inkqubo yokuphononongwa kokuhamba komsebenzi, ulawulo loqhakamshelwano, iiforamu, ingxoxo ebukhoma, inkomfa ye-web cam, ukwabelana kwescreen njengezinto ezinokuthi zabelwe abasebenzisi kunye namaqela yindlela kuhle. Yizame http://www.same-page.com
Jan 13, 2011 ngo-7: 09 PM
FYI - Ndisandula "ukukrwela phantsi". 🙂
Feb 25, 2011 ngo-9: 49 PM
Iposi eyoyikekayo! Kudala ndizama ukuqokelela ulwazi olunje malunga nenkampani yam kwaye ndibhale eyam ibhlog malunga nokuba kutheni sinamathele kwi-Basecamp. Yijonge ukuba utyekele: http://lab.neo-pangea.com/blog/2011/02/basecamp-sucks-less-than-everything-else/
Mar 13, 2011 ngo 8:53 PM
Ngokwam, ndisebenzisa iBasecamp kuba kwakulula kwiqela lam ukuba liyamkele. Ndicinga ukuba kubalulekile ukuba nesoftware yolawulo lweprojekthi.
Unokufuna ukujonga izimvo zam kwi-Basecamp, nakwizona ziphuculweyo Umsebenzi weqela
Meyi 8, 2011 kwi-6: 37 AM
Sisebenzisa i-basecamp ku-Social Media Magic ukwabelana ngeembono kunye nokulandela umkhondo wonxibelelwano lwabaxhasi. Khange sibe nayo imiba nabo. Andinguye nyani ukuba ndifunde ibhlog yabo kakhulu, kodwa kunokwenzeka ukuba yayilelo luvo lombhali othile. Andizukuvumela uluvo lombhali omnye lundisuse kwisicelo esiluncedo kangako. Sisebenza njani isicelo sakho esitsha? Ndijonge phambili kunxibelelwano nawe kwikamva!
Jul 20, 2011 ngo-8: 27 AM
Zininzi izinto ezinokuphuculwa kokusebenziseka ezinokuthi zenziwe kwi-Basecamp. Ndiyamangaliswa kukuba kungabikho mbutho wakhelwe kuyo. Indlela esebenza ngayo akukho ndawo icacileyo yendawo iphela ukuze abasebenzisi abatsha bangene kwiprojekthi emiselweyo kufuneka banxibelelane nomnye umntu ukuze bafumane apho banokufumana khona izinto. (Ewe, NGAMAXESHA athile unokufumana izinto kukhangelo kodwa hayi rhoqo.)
Ndikunye nawe ekusebenziseni igama elithi 'f'. Ngelixa ngamanye amaxesha ndiyeka isitshixo sokutyibilika kwigama akukho sizathu sokungayibambi loo nto xa ubhala. Ndiyakholelwa ukuba kukungabi nantlonelo kubafundi bakho kwaye ayifanelekanga kwinkampani exubileyo. Ngokuqinisekileyo ukhona umahluko phakathi kwendlela othetha ngayo xa uphume nabahlobo bakho abanxilileyo kunye nezinto owabelana nazo esidlangalaleni.
Agasti 19, 2011 kwi-12: 03 AM
Yhu! Ndabona nje esi sithuba kwaye wafunda uninzi lwezimvo. Uninzi lweepanty kwiqela. Kutshanje ndiye ndaqala ukusebenzisa iBasecamp kwaye kukho inani lezinto ezincinci ezindikhathaza ngayo. Enye yazo kukuba andikholelwa ukuba andinakuchwetheza nje umhla, kuya kufuneka ndikhethe umhla kwi-pop-up. Ngokwenene? Ngaba ndenza into engalunganga? Siza kubona ukuba kuhamba njani.
Sep 1, 2011 ngo-6: 23 PM
Ewe, ezo zithuba zebhlog zazivela ngo-2007 kubonakala… oko kundikhokelela kwinto endicaphukisayo. Yabhalwa nini le post? 2007, 2008, izolo? ngaphandle komhla obekiweyo ukuze ndazi njani ukuba ulwazi endilufundayo lusasebenza nanamhlanje.
Ndiqinisekile ukuba zikho izizathu ezifanelekileyo zokungawufaki umhla kwisithuba, kodwa ngokwembono yomsebenzisi, iyanya.
btw, ndisebenzisa i-basecamp nangoku-ndiyavuma, inazo izinto ezisezantsi, kodwa xa zisetyenziswa nolunye usetyenziso lwangaphandle ungasebenza kwimicimbi emininzi. Akuzange kubekho zikhalazo kubathengi malunga nokuba nzima ukuzisebenzisa. iisenti zam ezi-2 kuphela
Sep 2, 2011 kwi-12: 48 AM
Kwakuyiminyaka embalwa edlulileyo, uDavid. Okumangalisayo kukuba ... ndibuyile eBasecamp ngoku. 🙂
Novemba 29, 2011 ngo-5: 55 PM
Ndisengumlandeli omkhulu wama-37signals, nangona ndiyicimile iakhawunti yam yeBasecamp. Benze imveliso ekhethekileyo kwaye inomdla… ngelo xesha. Ngoku ndilindele okungakumbi. Kutshanje ndiye ndaqala ukusebenzisa i-KanbanTool-ndiyayithanda kakhulu i-interface. Ndiyathemba ukuba ngenye imini ndiza kuthetha okufanayo ngeBascamp kwakhona.
Epreli 19, 2012 ngo-3: 45 AM
Besisebenzisa i-Basecamp iminyaka eliqela kodwa kutsha nje (malunga nonyaka ophelileyo) siphumeze kwinkampani yethu esinye isisombululo sesoftware esivela kwi-comindware. Ukusebenza ngakumbi, ukhetho oluninzi kunye nobuchwephesha obuninzi obunokuguquguquka kwetekhnoloji ye-ElasticData. Ukuba awukazami okwangoku- zama.
Epreli 24, 2012 ngo-3: 21 PM
Ndingathanda ukuva ukuba ucinga ntoni ngenkampu entsha. Andinguye fan, kodwa ndiyayifumana i-UI inomdla. Iingcinga zam?
Epreli 24, 2012 ngo-4: 51 PM
Andiguqukanga kuba kukho umda othile kuguquko. Kodwa, kuzo zonke iividiyo endizibonileyo kujongeka njengokusebenziseka okuhle kakhulu kunye nophuculo lwamava omsebenzisi olwenziwe oluya kwenza ukuba kube lula kwaye kube lula ukubuyisa umva naphambili phakathi kweeprojekthi.
Epreli 12, 2014 ngo-9: 08 AM
Molo, i-Basecamp eNtsha ilungile kodwa isasilela kwizinto ezininzi ezinje ngetshathi ye-gantt, iilwimi, ingxoxo eyakhelweyo, ukulandelelwa kwexesha, imisebenzi engaphantsi njl.
Epreli 14, 2014 ngo-12: 39 PM
Andiqondi ukuba baya kuze bongeze itshathi ye-gantt kwaye ndinyaniseke andiyathemba. Sizisebenzisela iiprojekthi ezincinci, kunye namaqela amancinci kwaye ukongeza iitshathi zeGantt kunokubangela ukuba sisuke eqongeni labo siye kukhuphisana nabo.
UPatrick Michael Coombe
Ngomhla wama-18 ku-Disemba 2012 ngo-4: 43 PM
Ndikhutyekiswe ngabantu abathi "cussing" endaweni yokuba "uqalekise." -Kubonakala ngathi umnini webhlog enye wayegrumba ukungcola okudala ukuze enze uvavanyo.